“အိန္ဒိယရေတပ်ရဲ့ အကြီးဆုံး နိုင်ငံတကာရေကြောင်းဆိုင်ရာတွေ့ဆုံပွဲနှင့် လေ့ကျင့်ခန်း ‘Milan 2020’ အား COVID-19 ကြောင့် ရွှေ့ဆိုင်း” ~ Myanmar Online News
“အိန္ဒိယရေတပ်ရဲ့ အကြီးဆုံး နိုင်ငံတကာရေကြောင်းဆိုင်ရာတွေ့ဆုံပွဲနှင့် လေ့ကျင့်ခန်း ‘Milan 2020’ အား COVID-19 ကြောင့် ရွှေ့ဆိုင်း”
10:30 PM နိုင်ငံတကာသတင်း No comments
အိန္ဒိယရေတပ်မှ ဦးစီးကျင်းပပြုလုပ်လျက်ရှိတဲ့ Milan 2020 လေ့ကျင့်ခန်းကို ယခု ၂၀၂၀ ခုနှစ် မတ်လ ၁၈ ရက်နေ့မှ ၂၈ ရက်နေ့အထိ Visakhapatnam မြို့မှာ ကျင်းပဖို့ စီစဉ်ဆောင်ရွက်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်...
ဒီလေ့ကျင့်ခန်းမှာ နိုင်ငံပေါင်း ၄၁ နိုင်ငံမှ ပါဝင်တက်ရောက်လေ့ကျင့်မှာဖြစ်ပြီး ဒေသတွင်း ရေတပ်များသာမက ပြင်သစ်၊ အီဂျစ်၊ သြစတြေးလျ၊ တောင်ကိုရီးယားနှင့် ဂျပန် ရေတပ်များလည်း ပါဝင်လေ့ကျင့်သွားမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်...
ဒါပေမယ့်လည်း ယနေ့ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှာ ဖြစ်ပွားနေတဲ့ coronavirus အန္တရာယ်ကြောင့် ၂ နှစ် ၁ ကြိမ် ကျင်းပပြုလုပ်လေ့ရှိတဲ့ ဒီရေကြောင်းဆိုင်ရာ တွေ့ဆုံပွဲကြီး ‘Milan 2020’ ကို အိန္ဒိယနိုင်ငံအနေနဲ့ ကြိုတင်ကာကွယ်သည့်အနေဖြင့် သင့်လျော်သည့် အချိန်ကာလတစ်ခုသို့ ပြောင်းရွှေ့စီစဉ်ထားကြောင်း ထုတ်ပြန်ကြေငြာခဲ့ပါတယ်...
"Indian Navy's biggest international exercise 'Milan' called off due to coronavirus threat"
The Indian Navy's biggest international exercise 'Milan 2020' has been postponed due to coronavirus outbreak threat. The multilateral naval exercise was scheduled to take place from March 18 to March 28 at Visakhapatnam.
The Indian Navy's biggest international exercise 'Milan 2020' has been postponed due to the coronavirus outbreak threat. The multilateral naval exercise was scheduled to take place from March 18 to March 28 at Visakhapatnam.
Invites for the exercise were sent to at least 41 countries, including France, Malaysia, Egypt, Sri Lanka, Australia, South Korea, Japan among others.
"The conduct of Milan 2020 had generatedavery enthusiastic response, with Navies around the world having expressed their desire to participate; and in the deference to this interest, the Indian Navy looks forward toward scheduling MILAN atalater convenient date,"astatement read.
https://www.indiatvnews.com/…/indian-navy-s-biggest-interna… REf ; Mg Moe
- အိန္ဒိယရေတပ်မှ ဦးစီးကျင်းပပြုလုပ်လျက်ရှိတဲ့ Milan 2020 လေ့ကျင့်ခန်းကို ယခု ၂၀၂၀ ခုနှစ် မတ်လ ၁၈ ရက်နေ့မှ ၂၈ ရက်နေ့အထိ Visakhapatnam မြို့မှာ ကျင်းပဖို့ စီစဉ်ဆောင်ရွက်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်...
- ဒီလေ့ကျင့်ခန်းမှာ နိုင်ငံပေါင်း ၄၁ နိုင်ငံမှ ပါဝင်တက်ရောက်လေ့ကျင့်မှာဖြစ်ပြီး ဒေသတွင်း ရေတပ်များသာမက ပြင်သစ်၊ အီဂျစ်၊ သြစတြေးလျ၊ တောင်ကိုရီးယားနှင့် ဂျပန် ရေတပ်များလည်း ပါဝင်လေ့ကျင့်သွားမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်...
- ဒါပေမယ့်လည်း ယနေ့ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှာ ဖြစ်ပွားနေတဲ့ coronavirus အန္တရာယ်ကြောင့် ၂ နှစ် ၁ ကြိမ် ကျင်းပပြုလုပ်လေ့ရှိတဲ့ ဒီရေကြောင်းဆိုင်ရာ တွေ့ဆုံပွဲကြီး ‘Milan 2020’ ကို အိန္ဒိယနိုင်ငံအနေနဲ့ ကြိုတင်ကာကွယ်သည့်အနေဖြင့် သင့်လျော်သည့် အချိန်ကာလတစ်ခုသို့ ပြောင်းရွှေ့စီစဉ်ထားကြောင်း ထုတ်ပြန်ကြေငြာခဲ့ပါတယ်...